ऐतिहासिक चन्द्र ग्रहण लाग्दै, यसरी हेर्नुहोस् फूल मुन र ब्लु मुन (भिडियो)
Home > Archive: १७ माघ २०७४, बुधबार १४:०६
१७ माघ २०७४, बुधबार १४:०६ (10)
चन्द्रग्रहण हुनु सामान्य खगोलिय घटना हो । तर,खग्रास चन्द्रग्रहण, सुपरमुन र ब्लु-मुन तीनवटै खगोलिय घटना एकैदिन परेकाले विश्वव्यापी चर्चा छ । धार्मिक मान्यताअनुसार चन्द्रग्रहण लागेको समयलाई राम्रो मानिँदैन । त्यस...
फुल्चोकीमा हिउँ हेर्न जाँदा हराएका बालक एक हप्तापछि सकुशल भेटिए
उनी फुल्चोकी जंगलबाट सकुशल भेटिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद सिलवालले बताए। सिलवालका अनुसार आफन्तले खोजी गर्ने क्रममा ति बालक भेटिएका हुन्। ‘म बच्चा भेटिएकाे ठाउँबाट फर्किं...
​आज चन्द्रग्रहण: ज्योतिषी भन्छन् – सक्नेले १२ घण्टा अन्न नखानु राम्रो
बुधबार खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । बेलुकी ५ बजेर ५५ मिनेटमा चन्द्रमा उदाउनुअघि नै ग्रहण सुरु हुने नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्यसचिव सूर्यप्रसाद ढुंगेलका अनुसार ५ बजेर ३२ मिनेटमा ग्...
प्रियंकाको इमेलमा २ लाख ५७ हजार इमेल पेन्डिङ
भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको इमेलमा साढे दुई लाख भन्दा बढी इमेल इनबक्समा रहेको छ । उनले यी इमेल खोलेर हेर्न भ्याएकी छैनन् । उनले आफ्ना शुभचिन्तक तथा अन्य कामका लागि पठाइएको २ लाख ५७ हजार ईमेल खोलेर हेर्न ...
‘निर्जला’ को फष्ट लुक रिलिज
चलचित्र ‘निर्जला’ को फष्ट लुक रिलिज गरिएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको फिल्मको फष्ट लुकमा तीन शीर्ष कलाकारलाई अटाइएको छ ।फिल्मका निर्माता प्रकाशचन्द्रले भने, ‘निर्जला फिल्म मार्फत मैले निर्माणमा हात हालेको छु ।...
थाहा पाउनुहोस्, चिनी पनि विष बन्न सक्छ !
डा. अरुणा उप्रेती, जनस्वास्थ्यविज्ञ चिनी स्वास्थ्यका लागि आवश्यक खाद्य पदार्थ हो । तर, यसको बढी सेवन मानिसका लागि विष साबित हुन सक्छ । चिया, पेय पदार्थ र खानामा हामीले चिनी पनि सँगै खाइरहेका हुन्छौँ । तर,...
यस्तो व्‍यक्ति जसको शरीरभरि ट्युमरै ट्युमर
सामान्‍य रोग लागेको बिरामी त चाडो भएकै होला। तर कुनै मानिस यस्तो विरामीले ग्रस्त हुन्छन् जुन कहिल्‍यै निको हुँदैन। उनलाई आफ्नै शरीर भद्दा र कुरुप महसुस हुन थाल्दछ। एउटा यस्तै व्यक्ति जसको शरीर भरी...
थाहा छ लज्जावती झारको अदभूत औषधिय गुण ? यसरी खानुहोस घरमै बनाएर कयौं रोग चैट
लज्जाबति झारलाई लाजवंती वा लाजमान्ने झारको नामले पनि चिनिन्छ। यसको बानस्पतिक नाम भने माईमोसा पुदिका हो।हात वा अन्य कुनै बस्तुले छुने बित्तिकै यसको पात ओइलाएर बन्द हुने हुनाले यसलाई लाजवन्ति झार भनिएको हो। गाउँघ...
कालगतिले १७ गैँडा मरे
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कालगतिबाट १७ वटा गैँडा मरेका छन् । तीमध्ये दुई बच्चासहित चार गैँडा बाढीका कारण मरेका हुन् । शून्य चोरी शिकारी भएको भए पनि बाढीसँगै जुँ...
१. बिहान उठ्नेबित्तिकै शरीर तन्काउने व्यायामहरू गर्नुहोस् । यसले रक्तसञ्चार र पाचनलाई बलियो बनाउँछ र ढाडको समस्याबाट जोगाउँछ । २. बिहानीको खाना नछोड्नुस् । तपाईंलाई वजन घटाउनुछ भने उपयुक्त ब्रेकफास्ट महत्वपूर्...